CAFFEE - (Adoolessa 18,2012): Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Loomii Badhoo Walgahii Idilee 12ffaa Waggaa 5ffaa Bara Hojii 5ffaa kana irratti haasawaa taasisan keessaa kan fudhatame.
CAFFEE – (Adoolessa 10,2013): Caffeen Oromiyaa, duudhaa Oromummaa ganamaa kan ta'e sirna dhibdeefi rakkoosaa ofiin itti furatu mana murtii aadaa hundeessuun beekkamtii kenne. - Saturday, 17 July 2021
CAFFEE – (Adoolessa 10,2013): Hojiiwwan Manneen Murtii keessatti bara baajataa 2014f karoorfaman Obbo Gazaaliin Caffeef dhiyeessaniiru. - Saturday, 17 July 2021
CAFFEE - (Adoolessa 09,2013): Miseensonni Caffee Oromiyaa gabaasa qaama raawwachiiftuu dhiyaate irratti hojii bara kana hojjetameef beekkamtii kennuun, yaadaafi gaafiilee adda addaas kaasaniiru - Saturday, 17 July 2021
CAFFEE - (Adoolessa 09,2013): Milkaa’ina hunda galeessa, keessattuu nageenyaafi olaantummaa seeraa mirkaneessuufi walitti dhufeenya naannolee ollaa cimsuuf hojii bu’a qabeessa hojjechuu dandeenyeerra jedhan Pirezidaantiin MNO Obbo Shimalliis Abdiisaa - Friday, 16 July 2021
CAFFEE - (Adoolessa 09,2013): Caffeen Oromiyaa, Raayyaa Ittisa Biyyaaf gulantaa/goonfoo kanaan dura qaban irratti dabalataan Oromiyaa keessatti jechi #GOOTA jedhu dabalamee akka waamaman murteesseera. - Friday, 16 July 2021
CAFFEE - (Adoolessa 09,2013): Amaanaa guddaa ummanni keenya nutti kennate kana qabannee xiiqiifi kutannoo olaanaadhaan injifannoo caalmaa galmeessuuf hojjechuu qabna jedhame. - Friday, 16 July 2021
CAFFEE – (Adoolessa 09,2013): Caffeen Oromiyaa, Yaa'ii Idilee 14ffaa Waggaa 6ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa isaa eebba abbootii Gadaafi Faaruu Oromiyaan saaqee jira. - Friday, 16 July 2021
CAFFEE – (Adoolessa 03,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii waggaa sektaroota kudhanii gamaaggameera. - Monday, 12 July 2021
Qabsaa’aafi mallattoo tokkummaa qabsoo Oromoo kan ta’e Artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjeechaa garajabinaa raawwatameef gadda guddaa natti dhagahame ibsa. Walgahii Idilee 12ffaa Caffee Oromiyaa yeroo addaa fi murteessaa ta’e kanatti waamamerratti argamuuf BAGA NAGAAN DHUFTAN!
Hundaa ol, weerara Dhibee Vaayireesii Koronaa bara kana addunyaa mudateen walqabatee of-eeggannoo ummanni keenya taasisuu qaburratti Caffeen qaamolee hawaasaa garaagaraa irratti xiyyeeffachuun ergaawwan adda addaa dabarsaa kan ture yoo ta’u, dhiibbaa dhibeen vaayireesii koroonaa fiduun lammiilee rakkoo diinagdeetiif saaxilamoo ta’aniifis waan qaburraa qoodudhaan, ummanni maaddiisaa qooduun deeggersa akka taasisuufi sosochiin ummataa akka umamuuf hojii fakkeenyummaa qabu hojjechaa turee jira.
Hojii kenna tajaajila lammummaa akka naannoo keenyaatti adda bahan hundarratti xiyyeeffannee yoo hojjenne bu’aan galmeessisnu bu’uura bal’aa waan qabaatuuf, fuula duraaf qaamoleen mootummaafi miti mootummaa, akkasumas, kutaaleen hawaasaafi waldaaleen siiviikii hojii eebbifamaa kanarratti bobba’uu fedhan hundi kallattii kana hordofuun kenna tajaajila lammummaa karaa mata dureewwan hunda haammatuun hojiirra akka oolchan carraa kanaan yaadachiisuun barbaada.
Bara kana Naannon keenya Dhibee Vaayireesii Koronaa dabalatee, rakkoolee nageenyaa bakka adda addaatti mudataa turaniin qoramaa kan ture ta’ullee, raawwiin karoora hojiilee misoomaa baay’ee jajjabeessaa akka ta’e ilaaluun danda’amee jira.
Keessattuu, sochii gama ijaarsa pirojektootaatiin ture akka waliigalaatti yoo madaallu, hojii keessatti hanqinaaleen muraasni mul’atanillee, caalmaatti raawwiin ture baay’ee olaanaafi hojii fakkeenyummaa qabu qofa osoo hin taane, muuxannoo gaariin kan irraa argamedha.
Siyaasa biyya keenyaa hammayyeessuun aadaan siyaasa biyyattii bu’uraan akka jijjiiramuuf mootummaan xiyyeeffannaa addaatiin hojjechaafi milkaa’ina isaatiifis aarsaa guddaa itti kaffalaa akka jiru ni beekama. Nageenya waaraafi fulla’aa ta’e mirkaneessuuf qaamni murteessaan ummata keenya akka ta’e mootummaan waan amanuuf, akkuma kanaan duraa fuula duraafis, ummata keenya waliin mari’achaa, yaadaafi gorsa isaas fudhachaa hojjechuun ammallee cimee kan itti fufu ta’a.
Gama biraatiin, hojii kutannoofi beekumsaan utubameen hirmaannaa hunda galeessa uummata keenyaatiin Hidhi keenya bishaaniin guutamuun isaa gammachuu keenya adda taasisa waan taheef Baga Gammaddan, Baga Waliin Gammanne jechuun barbaada.
Caffeen Oromiyaa, Yaa’ii Idilee 12ffaa Waggaa 5ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa har’a irraa egalee guyyoota itti aananiif gaggeessu kanarratti, raawwii hojii bara 2012 fi kallattii karoora hojii bara 2013 qaamolee mootummaa irratti marii bilchina qabu taasisuun akka raggaasisu ni eegama.
Kana malees, baajanni hojiiwwan Mootummaa Naannichaatiin karoorfaman ittiin raawwatamu kabajamaa Caffee kanaaf dhiyaatee ragga’uu waan qabuuf, Wixineen Labsii Baajata Bara Hojii 2013tiif ooluu danda’uufi wixineewwan Labsii akkasumas; muudamoota adda addaa dhiyaatan irratti mari’achuun kan raggaasisu ta’a.
Dhuma irrattis, akkaataa Heeraafi Seeraan taa’een, baay’inni miseensota Caffee argamuu qaban Yaa’ii keenya gaggeessuu kan nu dandeessisu ta’uun isaa waan mirkanaa’eef Yaa’iin Idilee 12ffaa, Waggaa 5ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa kun ifaan banamuu isaa ibsaa, yaa’iin keenya kun kan milkii akka nuuf ta’uun hawwaa.
CAFFEE – (Adoolessa 03,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii waggaa sektaroota kudhanii gamaaggameera.
CAFFEE - (Adoolessa 02,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii waggaa bara 2013 manneen hojii saddeetii gamaaggameera. __//__
CAFFEE - (Adoolessa 02,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii waggaa bara 2013 manneen hojii jahaa gamaaggameera.
CAFFEE – (Adoolessa 02,2013): Oromoon duudhaa isaa ganamaa kan ta’e sirni ammayyaa osoo hin dhufiin dura sirna ittiin walbulchuufi dhibdee qabu ittiin furatu kan mataasaa qaba.
CAFFEE - (Adoolessa 01,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa raawwii hojii waggaa bara 2013 sektaroota haqaa qorateera.
CAFFEE - (Adoolessa 01,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii waggaa bara 2013 manneen hojii sagalii gamaaggameera.
CAFFEE - (Adoolessa 01,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii waggaa manneen hojii shanii gamaaggamee jira.
Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Qabeenya Namaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 4ffaa manneen hojii sadii qoratee jira.
CAFFEE – (Waxabajjii 30,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Dubartoota, Daa'immaniifi Dargaggootaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii waggaa bara 2013 manneen hojii lamaa gamaaggame.
CAFFEE - (Adoolessa 09,2013): Milkaa’ina hunda galeessa, keessattuu nageenyaafi olaantummaa seeraa mirkaneessuufi walitti dhufeenya naannolee ollaa cimsuuf hojii bu’a qabeessa hojjechuu dandeenyeerra jedhan Pirezidaantiin MNO Obbo Shimalliis Abdiisaa
CAFFEE - (Adoolessa 09,2013): Caffeen Oromiyaa, Raayyaa Ittisa Biyyaaf gulantaa/goonfoo kanaan dura qaban irratti dabalataan Oromiyaa keessatti jechi #GOOTA jedhu dabalamee akka waamaman murteesseera.
CAFFEE - (Adoolessa 09,2013): Amaanaa guddaa ummanni keenya nutti kennate kana qabannee xiiqiifi kutannoo olaanaadhaan injifannoo caalmaa galmeessuuf hojjechuu qabna jedhame.
CAFFEE – (Adoolessa 09,2013): Caffeen Oromiyaa, Yaa'ii Idilee 14ffaa Waggaa 6ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa isaa eebba abbootii Gadaafi Faaruu Oromiyaan saaqee jira.
CAFFEE – (Adoolessa 10,2013): Caffeen Oromiyaa, duudhaa Oromummaa ganamaa kan ta'e sirna dhibdeefi rakkoosaa ofiin itti furatu mana murtii aadaa hundeessuun beekkamtii kenne.
CAFFEE – (Adoolessa 10,2013): Hojiiwwan Manneen Murtii keessatti bara baajataa 2014f karoorfaman Obbo Gazaaliin Caffeef dhiyeessaniiru.
CAFFEE - (Adoolessa 09,2013): Miseensonni Caffee Oromiyaa gabaasa qaama raawwachiiftuu dhiyaate irratti hojii bara kana hojjetameef beekkamtii kennuun, yaadaafi gaafiilee adda addaas kaasaniiru
Toorbee kana 7616
Ji'a kana 47116
2008 irraa eggalee 4783048
CAFFEE – (Adoolessa …
__//__ Wixinee Labsii Mana Murtii Aadaa Oromiyaa Hundeessuufi Beekkamtii Kennuuf Qophaa'e ilaalchisee Yaada Murtii Caffeef kan dhiyeessan Obbo Issaa Boruu D/Taa'aa Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraafi barbaachisummaa waltajjichaa ilaalchisee ibsa kan kennan...
__//__ Manneen Murtii Oromiyaa, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhamanii adda bahan kan akka ragaa sobaa, himannaa sobaa qulqulleessuun hojjachuu, daa'imman, dubartootaafi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu, hundeeffama mana murtii aadaa Oromiyaa hojiirra...
CAFFEE - (Adoolessa …
__//__ Miseensonni Caffee Oromiyaa, gabaasa qaama raawwachiiftuu Pireezidaantii MNO Obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaate irratti wayita yaada kennan, hojiiwwan gaggaarii waliigalaan bara kana hojjetamaa turaniif beekkamtii kennaniiru.
__//__ Bara 2013 keessatti biyyi keenya gaaga’ama rakkoo nageenyaa, dhibee COVID-19, Weerara hawwanisaafi dhiibbaa dippiloomaasii hidha laga Abbayyaatiin uumamaa ture hunda keessatti filannoo marsaa 6ffaa bara kana Waxabajjii 14 gaggeeffame karaa...
__//__ Caffeen, Yaada Murtee Raayyaa Ittisa Rippaabiliika Demokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaatiif Beekkamtii Kennuuf Qophaa’e irratti mari'atee kan mirkaneesse yommuu ta'u, Yaanni kun Yaada Murtee Lak. 08 Bara 2013 ta'ee kan waamamu ta'uus...
__//__ Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomiin haasawaa isaanii keessatti, Barri Hojii Caffee 5ffaa kun, qabsoo hadhaawaa geggeesseen rakkooleefi qormaatilee ciccimoo keessa darbuun, qormaatilee turan gara carraatti jijjiiruun; bu’aalee amma arginu kunniin...